အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် WIC | JPMA, Inc
အကယ်၍ သင်သည် WIC တွင်လူသစ်ဖြစ်လျှင်အောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ အကယ်၍ WIC ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ 'တစ်ဦး WIC ဆေးခန်းကိုရှာပါ” option ကို သုံး၍ သို့မဟုတ် Family Health Hotline ကိုခေါ်ပါ 1-800-755-ကြီးထွား (4769). ဒီအက်ပလီကေးရှင်းမှာအခက်အခဲရှိပါသလား။ JPMA ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ WICShopper@jpma.com
WICShopper သည်လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ မရပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စတိုးဆိုင်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ထုပ်ပိုးခြင်းကို အသုံးပြု၍ အတည်ပြုထားသောထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်ကြောင်းသတိရပါ။ သို့သော် အားလုံး မြေတပြင်လုံး, Pre-ဖြတ်, ကိုခွဲသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီဝတ်ပြုအရွယ်အစား ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ် dips မပါဘဲ ခွင့်ပြုထားပါသည်။ အချို့ရှိကတခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အသေးစိတ်များအတွက် app ထဲမှာသင့်ရဲ့အစားအသောက်စာရင်းကိုကိုးကားပါ။
WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်မှတ်ပုံတင်တွင်မည်သည့်ပြproblemsနာများရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏ WIC သက်သာခွင့်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောအကျိုးခံစားခွင့်များကိုထုတ်ကုန်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ eWIC ကဒ်ကိုသင်မသွင်းရသေးပါကစတင်ရန် 'ကျွန်ုပ်၏အကျိုးခံစားခွင့်' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အရေးကြီးမှတ်စု - သင်မြင်သောအကျိုးခံစားခွင့်များကိုတစ်ရက်အထိနှောင့်နှေးစေသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကို WICShopper သို့တင်သောအခါမည်သည့်အချိန်၌ကြည့်ရှုရန်သင့်သက်သာခွင့်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ထိုအချိန်ကတည်းကစျေးဝယ်ထွက်ခြင်းသည်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်ချိန်ခွင်၌ထင်ဟပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
eWIC မေးခွန်း & အ
A: သင်၏ဓာတ်ပုံ ID ကိုသင်၏ထုတ်ပေးနေသော WIC ဆေးခန်းသို့ယူ သွား၍ ချက်ချင်းသတင်းပို့ပါ။ သင်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကဒ်များကိုအစားထိုးခြင်းမပြုမီစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလရှိလိမ့်မည်။
A: ဒါကြောင့်သော့ခတ်ကြောင့်သင့်ကဒ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်သင်သင်တို့အဘို့ကသော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ပုံ ID နှင့်ဆေးခန်းဝန်ထမ်းများနှင့်သင်၏ထုတ်ပေး WIC ဆေးခန်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
Q: ဘယ်လို WIC အာဟာရကတ် (WNC) နဲ့ငါ့ WIC အကျိုးကျေးဇူးများကိုရကြလိမ့်မည်နည်း
A: သင်၏ဆေးခန်းသို့သွားစဉ်အတွင်း WIC အစားအစာများကိုသင်၏ WNC သို့တင်လိမ့်မည်။ ဆေးခန်းသည်သင်၏ WIC အစားအစာများကိုသင်၏ကဒ်ထဲသို့ထည့်ပြီးသည်နှင့်သင်ချက်ချင်းစျေး ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်၏ WIC အစားအစာများကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသူတို့သည်သင်၏ကဒ်ရှိအစားအစာလက်ကျန်ငွေမှပယ်ရှားသွားလိမ့်မည်။
A: WICShopper ရှိ“ Capture Receipt” function ကို သုံး၍ သင် ၀ ယ်တိုင်းသင်၏ eWIC လက်ကျန်ငွေပြပုံကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ သင်၏လက်ကျန်ငွေကိုသင်၏ WIC ဆေးခန်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုခုံဌာနသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ရှိငွေရှင်းကောင်တာများတွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
Aဖြေ - WNC ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်။ သင်၏ WNC ကိုသိမ်းပြီးသင်၏အစားအစာအသစ်များတင်ဆောင်ရန်သင်၏ WIC ရက်ချိန်းသို့ခေါ်သွားပါ။
Q: အဘယျသို့အကြှနျုပျသ PIN ကိုမေ့လျော့နေလျှင်?
A: သငျသညျကဒ်ထုတ်ပေးသောဆေးခန်းမှာသင့်ရဲ့ PIN ကိုပြန်ညှိမှုရှိနိုင်ပါသည်။
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီး 200 WIC ရုံးများကျော်ရှိပါတယ်။ သငျသညျအနီး WIC ရုံးကိုရှာဖွေရန်:
မိသားစုကျန်းမာရေး Hotline Call 1-800-755-ကြီးထွား (4769)
WICS အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိစေရန် WICShopper အက်ပ်တွင်ထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ယူရန်သင့်တွင်အကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်သတိရပါ။
သင့်ရဲ့အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် WIC သင်မဝယ်နိုင် WIC အစားအစာများကိုကြည့်ရှုရန် WICShopper (သို့မဟုတ်သင့်ပုံနှိပ်ဗားရှင်း) တွင်အစားအစာများစာရင်း (AFL) Authorized ကိုသုံးပါ။
ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ မရပါ - ဆိုလိုသည်မှာဤပစ္စည်းသည် WIC အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိကိုအက်ပလီကေးရှင်းကမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ စတိုး၌ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်နေရာတစ်ခုရှာရန်ကြိုးစားပါ။
အဆိုပါ WNC လက်ခံမယ့်ကုန်ပစ္စည်းလမ်းသွားအသုံးပြုပါ။ သငျသညျသေချာမသိကြပါလျှင်တစ်ဦးစတိုးဆိုင်န်ထမ်းကိုမေးပါ။
သည်အခြားပစ္စည်းများအနေဖြင့်သီးခြား WIC အစားအစာများ။
ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ရန်သင့်အားတောင်းတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ WNC ကဒ်စာဖတ်သူသို့ထားပါ။ သင့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဂဏန်းလေးလုံး PIN နံပါတ်ရိုက်ထည့်ရန်သေချာစေပါ။ သင့်ရဲ့ PIN ကိုမှားယွင်းစွာဦးထက်ပိုခုနစ်ကြိမ်ထဲသို့ဝင်လျှင်သင်၏ကဒ်သော့ခတ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကဒ်သော့ခလောက်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ရုပ်ပုံမှတ်ပုံတင် (ID) တွင်ယူနှင့်သင့်ကဒ်က unlocked ရဖို့ထုတ်ပေးရာ WIC ဆေးခန်းမှပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျကဒ်စာဖတ်သူသို့သင့်ရဲ့ WNC ဝတ်နှင့်သင့်မှန်ကန်သော PIN ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ကစပြီးအစားအသောက် Balance လက်ခံရရှိ print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ငွေရှင်းကောင်တာတွင်သင့်ရဲ့အစားအစာအားလုံးတို့ကိုစိစစ်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦး WIC အစားအစာများဝယ်ယူလက်ခံရရှိလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်ဝယ်ယူသည့် WIC ပစ္စည်းများကိုတစ် Display ကိုမျက်နှာပြင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တောင်းဆိုခံရမည်။ သငျသညျဝယ်မှသာပစ္စည်းများစာရင်းနှင့်စျေးနှုန်းများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြ၏သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ငွေပေးချေမှုပြီးဆုံးချိန်တွင်ကဒ်ပြားကိုကဒ်မှထုတ်ယူခြင်းသည်လုံခြုံသည့်အချိန်တွင်ငွေကိုင်သည်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ WIC အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုလက်ခံရန်“ ဟုတ်ကဲ့” ကိုနှိပ်ပါ။ “ Yes” ကိုနှိပ်ပြီးလျှင်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
သင်၏ဝယ်ယူမှုရဲ့အဆုံးမှာ, သင်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်တစ်ဦးထံမှအဆုံးသတ်ခြင်း Balance လက်ခံရရှိလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်သင်၏နောက်စျေးဝယ်ခရီးစဉ်များအတွက်လက်ရှိလ၌ကျန်ကြွင်းသောအရာကိုအစားအစာအကျိုးကျေးဇူးများကိုသိရကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဒီလက်ခံရရှိထားပါ။
လုံခြုံသောအရပ်၌သင်တို့၏ WNC ထားပါ။ သင့်ရဲ့ WNC ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေသားများကဲ့သို့ဆက်ဆံပါ။
ဘေးကင်းလုံခြုံသင့်ရဲ့ PIN ကိုထားပါ။ သင်သည်သင်၏ကဒ် အသုံးပြု. မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းမည်သူမဆိုနှင့်သင်၏ PIN ကိုမမျှဝေပါနှင့်။
သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ PIN ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါဘူး။
, တင်နိုင်ဖြတ်သို့မဟုတ်သင့်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်ရေးမထားပါနဲ့။ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့တဲ့ကထားပါ။
သင်၏ PIN သို့မဟုတ်ကဒ်ကိုမရောင်းပါနှင့်၊ မကုန်ပါနှင့်။ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သည်။
A: "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!"သင်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေတစ်အစားအစာကို item အဆိုပါမှတ်ပုံတင်မှာငြင်းပယ်သောအခါသင်သည် WIC ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါ, "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!"ဟုအဆိုပါ WICShopper app ထဲမှာကျနော်တို့ပြည်နယ် WIC ရုံးမှာအသိပေးစာအရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနှင့်သင်ဖို့ခွင့်ပြုအစားအစာများရရှိနိုင်စေရန်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းများအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်!